उड्नासाथ टायर पड्कियो, ७६ जना यात्रु बोकेको विमान डेढ घण्टासम्म आकाशमै
एजेन्सी । अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा एउटा विमानको आकस्मिक अवतरण गराइएको छ । विमानस्थलबाट उडान भर्नासाथ टायर पड्किएपछि विमानको आकस्मिक अवतरण गराइएको हो । अधिकारीहरुका अनुसार क्वान्टस एयरवेजको ‘क्युएफ २५१२’ विमान आइतबार ब्रिसबेनबाट..
आजदेखि १५ दिन देशैभरका अदालतमा बिदा
काठमाडौँ । दसैँका कारण आइतबारदेखि देशैभरका अदालतहरु बिदा सुरु भएको छ। दसैँको घटस्थपानादेखि कोजागत पूर्णिमासम्म प्रत्येक वर्ष बिदा हुँदै आएकोमा यस वर्ष पनि सबै तहका अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुमा बिदा दिइएको सर्वोच्च..
नाङ्गो भिडियो बनाएर ४० लाख माग्ने जेलमा
काठमाडौं । युवती प्रयोग गरी विर्तामोडका एक व्यवसायीलाई रु ४० लाख नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका चार व्यक्ति पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । विर्तामोड नगरपालिका–४ मा..
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो गरेको दसैंको घटस्थापनाको दिन (१२ असोज) मा सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले घटस्थापनामा विदा दिने निर्णय गरेको जानकारी..
नेपाली अञ्जलीले जितिन् भारतमा ‘मोडल अफ द इयर’को उपाधि
काठमाडौं । बुधबार मुम्बईमा ‘भोग ब्यूटी अवार्ड’को १० औं संस्करण सम्पन्न भएको छ । उक्त अवार्डमा भारतमा बसेर मोडलिङमा सक्रिय रुपमा लागिरहेकी नेपाली मोडल अञ्जली लामाले ‘मोडल अफ द इयर’को..
काठमाडौं । पछिल्लो समय आफ्नो घर बहालमा लगाउने घरबेटीले भाडावालसँग चर्को दरमा विद्युत महसुल उठाउने गरेको पाइएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान..
बढ्यो वृद्ध भत्ता, अन्य भत्ता कति बढयो ? सुचनासहित
काठमाडौं । सामाजिक सूरक्षा भत्ता वृद्धि गरिएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै सामाजिक सूरक्षा भत्तामा वृद्धि गरेको जानकारी दिएको हो..
काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारले बिहीबार (भोलि) पनि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । बिहीबार हिन्दुधर्मालम्बीहरूको पर्व रक्षाबन्धन परेकाले प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक छुट्टी दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश २..
भोलि प्रदेश नम्बर ५ मा पनि सार्वजनिक विदा
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले भोलि (सोमवार) सार्वजनिक विदा दिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महत्वपूर्ण चाड इद..
सांसदलाई नै ट्याक्सीले ठगेपछि....................
काठमाडौँ । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा नेकपाकी सांसद आशा कुमारी विकले ट्याक्सीमा ठगी हुने विषय उठान गरेकी छिन् । बैठकमा बोल्दै उनले बुटवलबाट काठमाडौँसम्म ५ सय रुपैयामा बस चढेर..
एजेन्सी । भारतका चर्चित ‘कमेडियन’ कपिल शर्माले आफ्नो कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो’ मा जीवनको पहिलो कमाइ खुलाएका छन्। उनले जीवनमा पहिलो पटक काम गर्दा प्रिन्टिङ मिलमा गरेको र त्यस..
पठाओले मिटर शुल्कमा १ सय थपेर भोलीदेखि ट्याक्सी सेवा सुरू गर्ने
काठमाडौं । राइड सेयर कम्पनी पठाओले ट्याक्सी सेवा सुरू गर्ने भएको छ। दुई पांग्रे सेवाको सफलतापछि दोस्रो प्रोजेक्टको रूपमा आगामी शुक्रबारदेखि ट्याक्सी सेवा सुरू गर्न लागिएको पठाओका रिजनल डाइरेक्टर अशिममान..
ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स लिन बाँकी छ ? आयो खुसीको खबर
काठमाडौं । एक घण्टामा ४ सय ५० वटा सम्म स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्ने मास प्रिन्टर नेपाल भित्रिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा शुक्रबार मास प्रिन्टर ल्याउने भने पनि आज साँझसम्म..
काठमाडौं । आईसीसी टि–ट्वान्टी विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनोटमा नेपाल सिंगापुरसँग पराजित भएसँगै ग्लोबल क्वालिफायर पुग्ने सपना समाप्त भएको छ । एसिया फाइनलको अन्तिम खेलमा नेपाल घरेलु टोली सिंगापुरसँग ८२ रनले..
२०२० भित्र चीनले २९ हजार फुटबल मैदान बनाउने
बेइजिङ । चीनले आगामी सन् २०२० भित्र देशभर २९ हजार फुटबल मैदान बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ शिक्षा मन्त्रालयका एक जना वरिष्ट अधिकारी वाङ डेङफेङले चीनमा अझै पनि फुटबल..
काठमाडौँ । सूर्यले मिथुन राशीको भोग पूरा गरी कर्कट राशीमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन बुधबार साउने सङ्क्रान्ति पर्व मनाइँदैछ । साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु..
आजैबाट जग्गाको मूल्य ४० प्रतिशतले बढ्यो, कहाँको कति (मुल्य सूचिसहित)
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको सरकारी मूल्यांकन बढाएको छ । देशभरका मालपोत कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँगको परामर्शमा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन बढाएका हुन् । मालपोत कार्यालय कलंकीले ४० प्रतिशतसम्म जग्गाको..
साँचो साथी पाउन एकदमै गाह्रो छ । जिन्दगीमा धेरै साथी भेटिन्छन् तर असली साथी पत्ता लगाउन सजिलो छैन । तपाईंका लागि जे गर्न पनि तयार हुने व्यक्ति नै साँचो साथी..
काठमाडौ । भोली असार ३१ गते खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । यो ग्रहण नेपालको सबै भागबाट देखिन्छ । नेपालका साथसाथै दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एसिया र अष्ट्रेलियाबाट पनि देखिन्छ ।..
एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेशको बारम्बंकी जिल्लामा प्राइमरी स्कूलका अध्यापकका लागि निकै अचम्मको तरिकाले हाजिर गर्नुपर्ने नियम लागु भएको छ । नयाँ नियम अनुसार अध्यापकहरुले ठिक आठ बजे स्कूल पुगेर..
कुलेखानी इन्द्रसरोवर ड्याम खोलिँदै, सचेत रहन आग्रह, कहाँ कहाँ पर्छ प्रभाव ?
काठमाडौं । अत्याधिक पानी परेपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित ताल भनेर चिनिने कुलेखानी ड्याम इन्द्रसरोवर भरिएर खतराको संकेत देखिएपछि ड्यामको ढोका खोलिने भएको छ । कुलेखानीको ड्यामको ढोका खोलीने भएकाले..
चौँथो डिभोर्सपछि के गर्दैछिन् डोनाल्ड ट्रम्पकी ७० वर्षे पूर्वपत्नी इभाना ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक राष्ट्रपति बन्ने चुनावी दौडमा लागिरहँदा उनकी पूर्वपत्नी के गरिरहेकी होलिन् ? कतिपयलाई त ट्रम्पकी पूर्वपत्नी इभाना ट्रम्प ७० वर्ष पुगिसकिन् भन्ने पनि थाहा नहोला..
काठमाडौं । बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण हालसम्म ४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आइतबार बिहानसम्म २१ महिला र २७ पुरुष गरी जम्मा ४८ जनाको मृत्यु भएको हो..
कोसी ब्यारेजका ढोका बन्द गर्न भारतको दबाब
काठमाडौं । लगातार परेको पानीले सप्तकोसीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ। एक लाख ५० हजार क्यूसेक पानीको मापनपछि खतरा मानिने आज अपराह्न २ः०० बजेको मापनअनुसार दुई लाख ७४ हजार ६५ क्यूसेक..
काठमाडौं । बिहिबार रातिदेखि परेको पानीले हालसम्म २१ जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार २१ जनाको मृत्युसँगै १० जना अझै बेपत्ता छन्। त्यसैगरी १० घाइते भएको जानकारी दिएको..
अबिरल बर्षा भईरहदाँ २४ घण्टामा कहाँ कति मिलिलिटर पानी पर्यो ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा एक सय १५ मिलिलिटर वर्षा परेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार काठमाडौंमा एक सय १५.२ मिलिलिटर वर्षा भएको छ। सिमरामा तीन सय ११ मिलिलिटर वर्षा भएको..
काठमाडौं । बिहीबार रातिदेखि देशैभर मुसलधारे वर्षा भइराखेको छ। निरन्तरको वर्षाले तराईका विभिन्न जिल्लामा डुबान भएको छ भने पहाडमा ठाउँठाउँमा पहिरो खसेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार शुक्रबार दिनभर..
देशैभर बाढी र पहिरोको खतराः कुन कुन ठाउमा छ खतरा ?
काठमाडौं । बिहानैदेखि देशका विभिन्न भागमा वर्षा निरन्तर रुपमा भइरहेका कारण देशैभरी बाढी र पहिरोको खतरा देखिएको छ । बढेको पाइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान..
काठमाडौं । बिहीबार र शुक्रबार देशभरका साना तथा ठूला नदीहरुमा बाढीको उच्च सम्भावना रहेकाले पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा जुट्न सरकारले आह्वान गरेको छ । विशेषगरी तराई, सिवालिक र मध्य पहाडी क्षेत्रमा आगामी..
चलचित्र निर्माता छवि ओझाविरूद्ध शिल्पाले दिइन् घरेलु हिंसाको उजुरी
काठमाडौं । चलचित्र निर्माता छविराज ओझाविरूद्ध पत्नी तथा अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले घरेलु हिंसाको उजुरी दिएकी छन्। शिल्पाले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा तीन दिन अगाडि घरेलु हिंसा गरेको उजुरी दिएको हुन । उजुरी..
Results 289: You are at page2of 10